Global Voices teny Malagasy » Fanenjehana mpitoraka blaogy liberaly jiosy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Avrily 2011 10:39 GMT 1	 · Mpanoratra Bhumika Ghimire Nandika Candy
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Israely, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Solovava, GV Mpisolovava
Richard Silverstein, jiosy liberaly iray mpitoraka bilaogy, no iharan'ny fanenjehan'ny elatra havanana mahery fihetsika avy amin'ny nationaliste sy ara-pivavahana. Tao amin'ny bilaoginy Tikun Olam , namoaka filazana iray i Silverstein izay nalefa avy tany amin'ny mpisolovava azy, David Yerushalmi- miampanga azy ho manala-baraka.
Yerushalmi dia mpisolovava monina any Washington DC. Tamin'ny 2010, ny ThinkProgress  dia nitatitra ny fomba fijeriny momba ny Silamo sy ny lalàna Islamika. Nanambara Yerushalmi tao anatina lahatsoratra ho an'ny American Thinker fa,
Richard Silverstein, malemy fiteny ihany amin'ny fifandiran'ny Israeliana sy Palestiniana, dia lasibatry ny tsikera masiaka avy amin'ny maro tao amin'ny tontolon'ny blaogy. I Jewlicious  dia milaza azy ho
Lasa lavitra i Israellycool  ka niantso azy ho mpitoraka blaogy mpiahy ny horohoro, mpanohitra an'Israely.
Ny Kaomity hiarovana ny mpitoraka blaogy  dia manana lahatsoratra milaza amin'ny antsipiriany momba ny olana araka ny lalàna nomena an'i Silverstein ary koa mampirisika ny olona hanohana ny asan'i Silverstein sy ny zony haneho ny fomba fijeriny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/03/15746/
 Ny Kaomity hiarovana ny mpitoraka blaogy: http://committeetoprotectbloggers.org/2011/03/28/silverstein/